Box tselatra Games, ny ambony toerana slot nandefa lahatsary vaovao slot Panda Pow. Slot ity dia dimy amby roa-polo reels-karama dimy andalana iray. Izany dia mifototra amin'ny foto-kevitry ny Shinoa sariitatra 'Kung-fu bear'.The slot manome endri-javatra tsy manam-paharoa izay manome tombony ho any 20 spins maimaim-poana ao amin'ny voalohany, fa ny fisian'ny re-trigger endri-javatra izay afaka manome hatramin'ny 40 spins maimaim-poana no mahatonga azy be karama kokoa. Tsy maintsy mikaroka ihany koa ireo volamena mahafinaritra pandas amin'ny reels izay hatao stacked hanao be fandresena. Raha tianao nanamarina ny vaovao avy slots slot ambony toerana dia izao no azo antoka fa mendrika ny slot ny volany rehetra no miloka.
ny fahasahiana, Kung-fu tia, cartoonish orsa mandray ny foibe sehatra ao amin'ny Panda Pow nanolotra ny slot toerana ambony 'helatra Box Games'. Ao amin'io lalao, ny mpilalao dia afaka milalao ny kely indrindra amin'ny £ 0.25 isan-kofehy ireny, ary ny ambony indrindra habetsaky ny £ 1000,00 isan-kofehy ireny. koa, misy afaka manitsy ny vola madinika isan-karazany avy amin'ny ambany indrindra isan-karazany ny £ 0.30 vola madinika isan-dalana, ny £ 100 vola madinika isan-tsipika. Izany dia ny fiverenana amin'ny mpilalao isan-jaton'ny 95-97%.
Inona no Tena Unique?
Tsy foana ny fahalianana hahafantatra mikasika ny sary teti-dratsy ny reels nitombo ny slot toerana ambony i.e Tselatra Box Games. Ny lahatsary vaovao slot Panda Pow no farany fanampin'ny lisitra io, ary efa nahazo fankasitrahana lehibe eo Casino mpilalao. Ny reels dia tsara napetraka manerana ny lalina resahana mena voaravaka fomba Shinoa sokitra.
Ny mpilalao dia tsy maintsy hihevitra ny fanilo, mpankafy sy ny vola madinika volamena, tahaka ny rehetra ny iray amin'izy ireo dia manolotra payouts niakatra ny amin'ny ho vola madinika ho an'ny isan-jato payline. Ary ireo rehetra ireo marika raha toa nanatevin-daharana ny goldfish afaka hampitombo ny winnings ho roan-jato coins.The mahasarika indrindra marika avy amin'ny fitsipika marika dia zazakely pandà- sasatra amin'ny hazo sampana. Io famantarana hanampy anao ny 2, 5, 50, 125 na 500 vola madinika raha misy mpilalao dia afaka an-tanety ny iray, roa, telo, efatra na dimy ao amin'ny iray amin'ireo 25 mandoa andalana ny lalao.
Pandas sy Free Spins
Ny iray amin'ireo maso-misambotra mariky ny ity lalao ity faharoa pandà- mitafy mena fehiloha. Miasa ho toy ny bibidia ary koa ny aelezo mariky ary afaka soloina hafa rehetra marika. Ary, mety ihany koa ny manampy ny hampavitrika ny endri-javatra tombony maimaim-poana. Mety ihany tany izy tamin'izany 3 afovoany reels ary afaka mamorona mitambatra fandresena ho fandresena lehibe. Landing dimy na mihoatra izany Afaka mampihetsika ny tombony maimaim-poana izay endri-javatra sy ny mpilalao no nahazo toy izao manaraka izao-
5 maimaim-poana spins for 5 pandà manahaka.
8 maimaim-poana spins for 6 pandà manahaka.
12 maimaim-poana spins for 7 pandà manahaka.
15 maimaim-poana spins for 8 pandà manahaka.
20 maimaim-poana spins for 9 pandà manahaka.
koa, misy afaka mahita mora foana ny vaovao mariky stacked – Ny Golden Panda dia nanampy ny reels maimaim-poana ao amin'ny spins. Ity marika hita tanteraka mpilalao stacked rehefa mamely ny reels 2, 3, 4 ary 5. Ary, mba hanangana mandresy mitambatra, marika izany dia afaka manolo marika hafa rehetra, afa-tsy noho ny aelezo. Landing maro amin'izy ireo amin'ny kofehy ireny ihany, misy afaka mahazo valisoa goavana.
Panda Pow ny slot toerana ambony i.e helatra Box Games foana tanteraka ny zavatra andrasana avy amin'ny slot tia. Ny tombony manokana endri-javatra, ity lalao ity dia ho tena mampiankin-doha. Manana hampifandrafy antonony, ary ny iray dia afaka manantena ny hahazo ny ambony indrindra ny hatramin'ny 500 × ny tsatòka. Box ny tselatra mazava voaporofo ho toy ny slot toerana ambony amin'ny alalan'ny fandefasana mampientam-po io lalao! Jereo izany ny tenanao!
Roulette Free Mobile Game | Best Phone Casino | £ 500 Free